क्वारन्टीनमा प्रहरी जवान को यो नृत्य देखेपछी सबै च’कित ! जताततै भिडियो भयो भाइरल (हेर्नुहोस भिडियो) – Life Nepali
क्वारन्टीनमा प्रहरी जवान को यो नृत्य देखेपछी सबै च’कित ! जताततै भिडियो भयो भाइरल (हेर्नुहोस भिडियो)
कोरोनाको कहरले लामो समयस’म्म बन्दाबन्दी हँुदा नागरिकको जनजीवन क’ष्टप्रद बन्यो । व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कलका’रखाना, सवारी’साधन, बजार ठप्प हुँदा नागरिकले बन्दा’बन्दीको समयमा निकै समस्या भो’ग्न बा’ध्य भएका थिए । अहिले विस्तारै बन्दाबन्दी खु’कुलो हँुदै जाँदा दैनिक जीवनया’पन सहज बनेको छ ।
“वाताव’रण खुकुलो बन्दै जान था’लेपछि ग्राहकले नै व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेपछि पुनःसुचारु गरियो, व्यापार पहिलेको तुलनामा अत्यन्तै कम छ तर दिनप्रतिदिन विस्ता’रै बढ्दै भने गएको छ” । यसै क्रम’मा दाङ देउखुरी घर भएका प्रहरी जवान जयप्र’काश चौधरी क्वारन्टीनमा नाचेको भि’डिओका कारण अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छन्। पाल्पास्थित एउटा विद्यालयमा बनाइ’एको क्वारन्टीनमा सुरक्षार्थ खटि’एका बेला उनी यसरी नाचेका हुन्।
क्वारन्टी’नमा बस्दा वा’क्क लागे’को बताउने मानिसहरूकै आग्रहमा ‘साउन्ड सिस्टम’ जुटाइदिएको र उनीहरूकै आग्रहमा आफू नाचे’को उनले बताए। चौधरी सात बर्षदेखि नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छन् । उनि भन्छन्, क्वारन्टीनमा मनोरञ्जन र खेलकुद निकै आवस्यक रहेको हुन्छ । यो क्वारन्टीनमा भारत’बाट फर्किएका मानिसह’रुलाई राखिएको थियो । आफु नाचेको भिडियो धेरैले हेरेर भाइरल हुँदा निकै खुसि ब्याक्त गरेका छन् । – ताजा खबर
Previous स’र्प यसरि पक्रनु पर्छ भनेर सिकाउँन खोज्दा, सिकाउने मान्छेलाई नै स’र्पले टो’केपछि (भिडीयो)
Next अभिनेत्री केकी अधिकारी भन्छिन् : दीपाश्री निरौला छोरी भएर जन्मिनु नै गल्ती !